waa maxay qaabdhismeedka caadiga ah ee imtixaanka otomaatiga ah?
Ugu Weyn Ee Otomaatiga Waa maxay Qaabdhismeedka caadiga ah ee Imtixaanka iswada?
Waa maxay Qaabdhismeedka caadiga ah ee Imtixaanka iswada?
Sideen u qaabeynaa tijaabooyinkeena otomaatiga ah? Waxaa taas ka sii muhiimsan, sidee baan uga dhigi karnaa tijaabooyinkeena otomaatiga ah kuwo la go'aamin karo oo la soo celin karo?
Tijaabad kasta oo otomaatig ah waa inay ahaataa mid ansax ah oo ka soo horjeedda hal ama in ka badan oo xaalado ah. Taasi waa, inta la abuurayo tijaabo otomaatig ah, waa inaan ogaanno natiijada ficilku inuu noqdo si aan u dhigno hadalada qiimeynta habboon.
Imtixaanada otomaatiga ah waa in si otomaatig ah loo socodsiiyaa iyada oo aan wax faragelin ah lagu haynin. Intaa waxaa sii dheer, natiijooyinka tijaabooyinka otomaatigga ah waa inay ahaadaan kuwo go'aamin ah oo lagu kalsoonaan karo.
Laakiin sideen ku gaari karnaa tan?
Jawaabtu waa iska fududahay laakiin waa mid inta badan la dayaco oo ah, isticmaalka xogta la xakameeyey .
Si loo tijaabiyo imtixaan, waxaan u baahanahay saddex qaybood:
Qeybta kaliya ee saameynta ku leh dhaqanka dalabka waa xogta ; Xogta arjigu u baahan yahay iyo xogta lagu quudinayo.
Si loo muujiyo tan, ka feker arjiga ganacsiga e-commerce halkaasoo isticmaaleyaashu ay ka raadin karaan alaabada.
Bogga natiijooyinka raadinta ayaa u eegi lahaa oo u dhaqmi lahaa si ka duwan marka ay jiraan alaab ku jirta keydka macluumaadka marka loo eego marka keydku uu madhan yahay.
Sida iska cad tijaabooyinkeena otomaatiga ah waa inay wax ka qabtaan dowlado kala duwan oo dalab ah ayna hubiyaan dabeecadaha kala duwan.
Markaan raadineyno wax soo saar oo aan aragno liisasyo, sideen ku xaqiijin karnaa natiijooyinka? Sideen gabi ahaanba u hubsan karnaa in xogtaan ay tahay waxa aan filayno? Intaa waxaa sii dheer, sidee uga dhigi karnaa geeddi-socodkan mid soo noqnoqonaya si mar kasta oo la geeyo meel kasta oo cusub aan u helno natiijo isku mid ah?
Sida Loo Sameeyo Imtixaanada Iswada
Maxaan ugu baahanahay xogta la xakameynayo ee tijaabooyinka otomaatiga ah?
Waxaan ku siinayaa tusaale dhaqan xun oo aan si joogto ah u arko in lagu sameeyo imtixaannada otomaatiga ah:
Imtixaan aad u liita ayaa ah inaan raadino badeecad waxaanan cadeynaynaa inaan helno liisaska qaarkood oo la soo bandhigay. Si qoto dheer uma hubin doonno - illaa iyo inta ay jiraan alaabooyin lagu soo bandhigay bogga, markaa waan fiicanahay. WAALAN!
Nasiib darrose, tani waxay ka tagaysaa su'aalaha qaarkood oo aan jawaab loo helin:
Sideen ku ogaan karnaa inay xogta ka imaaneyso keydka saxda ah? Miyaynu ku xidhn nahay server jeesjees ah oo leh xog jees jees ah?
Sideen ku ogaan karnaa in xogta la soo celiyay ay dhab ahaan tahay wixii aan raadineynay?
Sideen ku ogaan karnaa tirada saxda ah ee walxaha lagu muujiyay bogga natiijooyinka raadinta?
Waxaan u baahanahay inaan awoodno inaan ku adkeysano natiijooyinka baaritaanka. Sheegashooyinku waxay u baahan yihiin inay macno yeeshaan oo ay noqdaan jeegag ansax ah.
Haddii aynaan xakamaynin xogta, markaa ma lihin hab aan ku ogaan karno ama ku hubin karno su'aalaha kor ku xusan.
Si loo sameeyo tijaabooyinka otomaatiga ah ee go'aaminta, waxaan u baahanahay inaan abuurno xogta nafteena. Imtixaanada otomaatigga ah waa inay ku duraan xogta la ogyahay isla markaana ay ansaxiyaan natiijada ka soo baxda xogtaas.
Haddii aan kaliya ku tiirsanaano xogta ay adeegsanayaan habab kale oo ay ku xiran tahay isbeddel, markaa tijaabooyinkayaga otomaatiga ah laguma kalsoonaan karo. Ma lihin qaab aan ku go'aamin karno natiijooyinka.
Sida Loo Sameeyo Imtixaanada otomaatiga ah ee lagu celiyo
Tijaabooyinka otomaatiga ah waa inay si otomaatig ah u shaqeeyaan. Qaab otomaatig ah oo run ah, imtixaannada waxaa kiciya hanaan ay ka mid yihiin dhuumaha dhuumaha CI / CD dhiska oo kontaroolaya fulinta iyo ka warbixinta baaritaannada.
Mar labaad, sida aan ula macaamilno xogta waxay saameyneysaa kalsoonida iyo soo noqoshada tijaabooyinka otomaatiga ah.
Qaab dhismeedka caadiga ah ee tijaabada otomaatiga wanaagsan waa
1 - Dejin [Abuur xog la yaqaan]
2 - Tijaabi [Isticmaal xogta la abuuray]
3 - Ilmada (Burburi xogta la abuuray)
Abuur Xogta Tijaabada
Maxaan ugu baahanahay inaan dejino xogta imtixaanka mar kasta? Tani miyaanay ina gaabin doonin markasta oo aan tijaabooyinka wadno? Miyaanan kaliya dejin karin ka dibna dib u isticmaali karno isla xogta?
Hagaag, sidee ku ogaan karnaa waxa ku dhacaya xogta ka dib imtixaanku markuu dhammaado? Malaha qof kale imtixaankiisa ayaa wax ka beddelay ama tirtiray xogta?
Sideen ku hubin karnaa marka xigta ee aan rabno inaan isla tijaabadaas wadno, xogtu horeyba way u jirtey si aan u isticmaalno?
Burbur Xogta Tijaabada
Maxaan ugu baahanahay inaan baabiino xogta baaritaanka la abuuray?
Sababtoo ah fulinta xigta, markaan isku dayno inaan abuurno xogta baaritaanka, waxaa jiri doona xog nuqul ah ama ka xun waxaa laga yaabaa inaan helno waxyaabo ka reeban oo lagu tuuro imtixaannada.
Haddii aynaan tirtirin xogta baaritaanka oo aan sii wadno dib u soo saarista xogta tijaabada ah ee aan kala sooca lahayn, markaa si fiican, saacadaha dheeraadka ah ee keydka waxay yeelan doonaan xog badan oo baaritaan ah waxaanna la kulmi lahayn dhibaatooyin kale
Marka hubi inaad abuurto oo aad baabiiso xogta baaritaankaaga.
Si aan uga helno qiimaha ugu badan dadaalka otomaatiga imtixaankeena, waxaan u baahanahay inaan qaabeyno tijaabooyin wanaagsan oo qaab dhismeed wanaagsan leh.
Hal dariiqo oo aan uga dhigi karno tijaabooyinkeenna kuwo la saadaalin karo oo la go'aamin karo ayaa ah in la xakameeyo xogta imtixaanka. Halkii lagu tiirsanaan lahaa xogta jirta ee tijaabinta, tijaabooyinka otomaatigga ah waa inay ku abuurtaan xogta sidii tallaabo hore loogu sii wado xaaladaha.
Markaad abuurto xogta baaritaanka, waxaan ku tijaabin karnaa xaalado kala duwan. Intaa waxaa sii dheer, waxaan hubin karnaa in bayaanada caddayntu ay hubinayaan xogta la yaqaan. Tani waxay ka dhigeysaa imtixaannada mid go'aamin ah.
Si aan ugu celcelino xaaladaha imtixaanka otomaatiga ah, waxaan u baahanahay inaan hubino in imtixaanadeena ay abuuraan xogta baaritaanka ka hor intaanay socon xaaladaha. Tan waxaa lagu sameeyaa qaybta dejinta ee tijaabada otomaatiga.
Xaaladda ayaa markaa isticmaali doonta xogta lagu abuuray tallaabada dejinta.
Ugu dambayntii markaynu dhammaynno tijaabinta, waa inaynu haysannaa hab lagu nadiifiyo bay'adda imtixaanka iyadoo la tirtirayo wixii xog ah ee la abuuray. Tan waxaa lagu sameeyaa qaybta ilmada ee imtixaanka otomaatiga ah.
Tijaabi talooyinka otomaatiga iyo hababka ugu fiican
Tijaabi istaraatijiyad otomaatig ah oo loogu talagalay mashaariicda degdegga ah
ma haysan karaa qoraalkayga 7
samsung galaxy tab s2 nougat
flash drive loogu talagalay taleefanka gacanta
Heshiisyo cusub oo kulul ayaa Samsung & apos; s Galaxy Note 10 iyo Note 10+ galiya dhul gorgortan ah
Amazon ayaa horay u eegaysa heshiisyadeeda ugu wanaagsan ee Black Friday 2019, iibintu waxay bilaabmaysaa Nofeembar 22
Waxyaabaha ugu Fiican ee Maalintii Amazon Prime Day 2021
OtterBox Defender Rugged for Samsung Galaxy S6 dib u eegis kiis
Cusboonaysiinta Sebtember 29th ee ku socota Super Mario Run waxay keeneysaa dabeecad cusub, adduun cusub iyo heshiis 50% ah
Saaxiib, meeday gaarigeygu? Khariidadaha Apple ee iOS 10 ayaa jawaabta heli doona
Waa & apos; 'Ultimate Movie Weekend' oo macnaheedu yahay kiradu waxay ka bilaabaneysaa 99 senti ee Google Play Store
IOS 10 taariikhda sii deynta, waqtiga, iyo aaladaha u qalma: waa maanta & apos; (Sebtember 13)
Apple iPhone 11 Pro Max waxay soo bandhigtaa qiimaha dayactirka, iyo shaashaddaha ugu wanaagsan ee shaashadda si looga fogaado
Apple iPhone 12 MagSafe xeedho ayaa u arka qiimo dhimis naadir ah shirkadda Amazon